news2dago | Oktobra 2008
[Ankapobeny ] 29 Oktobra, 2008 08:35
Alpha Blondy etsy Antsonjombe
Dia hirona sy hilomano ao anaty reggea indray ramalagasy @ farany herinadro satria dia hiseho sehatra etsy Antsonjombe ny alahady 2 novambra ingahy Alpha Blondy sy ny mpitendry sy teknisiana 17 be izao. Seho matihanina tanteraka moa no fanamby apetrak'i Joy K izay lasa mpikarakara lanonana lehibe toy izao. Manomboka mahazo sehatra avo avo ny lehilahy (Joy K) ankehitriny ary hinona fa ho mpifaninana @ media consulting sy ry kintana prod.
Mahagaga ahy ihany koa ny nahita an-gazety androany fa toa oe mirona kokoa @ kandida Barack Obama hono ny fon'ny tanora malagasy. Marihina fa tsy dia misy hidirany velively @ fianam-pirenena eto an-toerana ny mahalany azy ho filoha amerikanina fa mba te hanome vaovao fotsiny ilay gazety angamba hoy aho. Na ihany koa noho izy mainty hoditra no mety mba hiandrandran'ireto tanora malagasy azy ve? Mitarika tokoa aloha ranamana ankehitriny ary marobe ireo gasy mipetraka any sendra manoratra aty amiko oe mety ho lany tokoa izy @ 4 novambra. Eo izany no hanomboka hitsimbadika @ izay ny tantara ny Etazonia izay nalaza @ fanavakavahana vao tsy nisy 50 taona akory izay ary mbola ahitana izany any ankehitriny saingy kosa miseho @ endriny hafa.
Tantara lava be moa io resaka mainty sy fotsy io ary tena mbola mibahana eo @ fiaraha-monina eny fa na dia isika eto Madagasikara aza izay marihiko sy tsindriko eto fa samy voakilasy ho mainty hoditra avokoa na dia misy aza ny somary zarazara fihodirana dia mbola mipetraka foana izany resaka izany. Mahagaga tokoa! Tsy afaka miaraka hono ny andevo sy ny andriana fa samy manana ny lafim-pirazanany avy ireo. Ary raha sendra misy ny mpifankatia anakiroa tafaraka dia henatra ho an'ny fianakaviana. Azontsika porofoina ao @ karajia serasera ny ady hevitra momba an'izay.
Anjanoko eo ny amin'iny satria efa ny fiaraha-monina no nametra izany rindran-damina izay ka tsy maintsy manaraka ny rehetra.